ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ …. :: partner
Homepage > ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ ….
Happy Birthday!!! General Aung San.... The one and only... The hero we admire most, the hero we will never forget .....
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတွက် မွေးနေ့ အတွက် အမှတ်တရ သီချင်းလေးပါ ..............
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို ပြည်သူလူထု အာရုံကမှေးမှိန်ပျောက် ကွယ်သွားအောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ စစ်ဖိနိပ်အောက်မှာ ပြားပြားဝပ်နေရတဲ့ ဒီလို အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက ဗိုလ်ချုပ်ကို ပိုပြီး မမေ့မလျှော့နဲ့ သတိတရရှိနေပြီး၊ ကျန်တဲ့ ညီအကိုမောင်နှမအားလုံးကို လည်း..ဗိုလ်ချုပ်ကိုရော၊ ဗိုလ်ချုပ်ပြောသွားတဲ့ စကားတွေကို ပါ၊ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အချင်းချင်းလည်း ကိုယ့်မှာရှိသမျှ Photo, Video, Audio, other document တွေအားလုံး ကို Share စေချင်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ဒို့မမေ့ (13th February)
အောင်ဆန်းကို ယုံကြည်စွာနဲ့ သူတို့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် သိမှတ်ပြုကြ
(Zin Mg Mg ရဲ့ Notes မှာဖတ်ရတာကိုခွင့်တောင်းပြီး..ကူးချတယ်။ ပြီးတော့.ဓါတ်ပုံလေးတွေလျှောက်ထည့်ပြီးပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။)
Share via လူ ငတေ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မြန်မာပြည်ရှိ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး ကို ကိုယ်စားပြုသည့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး၊ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်ရိုးသားမှု တို့၏ သင်္ကေတဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သားတိုင်း သတိတရ ရှိနေသင့်ပေသည်။ ........
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို မှေးမှိန်ပျောက် ကွယ်သွားအောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဒီလို အချိန်မှာ..ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက ဗိုလ်ချုပ်ကို မမေ့မလျှော့နဲ့ သတိတရရှိနေပြီး...ကျန်တဲ့ ညီအကိုမောင်နှမအားလုံးကို လည်း..ဗိုလ်ချုပ်ကိုရော...ဗိုလ်ချုပ်ပြောသွားတဲ့ စကားတွေကို ပါ..ပြန်လည်ဖော်ထုတ်တင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...အချင်းချင်းလည်း ကိုယ့်မှာရှိသမျှ ဓာတ်ပုံတွေ၊ Video, Audio, other document တွေအားလုံး ကို Share စေချင်ပါတယ်...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ အမှတ်တရ Photo Album ကိုကြည့်ရှုလိုပါက ...https://www.facebook.com/photo.php?fbid=142067219182219&set=a.118372051551736.37407.100001368265940#!/album.php?fbid=118372051551736&id=100001368265940&aid=37407
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (ဘီအိုင်အေ)အားဖျက်သိမ်းပြီး မြန်မာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (ဘီဒီအေ) ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ 1942 ခုနှစ်က ဖြစ်သည်။တပ်အင်အားသုံးထောင်ကျော
်ရှိသောမြန်မာ့လွပ်လပ်ရေးတပ်မတော်အား ဂျပန်အာဏာပိုင်တို့ကလက်တစ်ဆုပ်စာခန့်ရှိသောမြန်မာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးပြီး မြန်မာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကို ဦးစီးရန်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအားဗိုလ်မှုးကြီး(ကာနယ်)အဆင့်သို့ လျှော့ချလိုက်သည့်အချိန်မှစပြီး အရာရှိ အရာခံ အကြပ် တပ်သားအားလုံးစိတ်ထိခိုက်ကာ စိတ်ဓာတ်ကျနေကြသည်။သေဖော်သေဖက် ရောင်းရင်းရဲဖော်အချင်းချင်းရုတ်တရက်ကွဲကွာခဲ့ရခြင်း၊ဖက်ဆစ်ဂျပန်တပ်များဧ။်အခါအခွင့်သင့်တိုင်း စော်ကားခံရခြင်းတို့ကြောင့်ရဲဘော်ရဲဘက်များ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေခြင်းလဲပါဝင်သည်။
ပျဉ်းမနားစခန်းတွင်ပြောင်းရွှေ့စုစည်းရောက်ရှိနေသော ဘီဒီအေတပ်ရင်းသုံးရင်းသည် အမြဲတမ်းစစ်တပ်အနေဖြင့်တန်းစီခြင်း၊စစ်ရေးပြခြင်း၊တပ်ဝင်ရှင်းလင်းခြင်းများ
ပြုလုပ်ကာအမြဲတန်းစစ်တပ်အသွင်ဖြင့်နေရသော်လည်း စစ်ဝတ်စုံ (ယူနီဖောင်း) များညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိခြင်းက ချွတ်ယွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်နေလေသည်။ ရဲဘော်အားလုံးကပင်မြန်မာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အတွင်း ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ထိုက်သင့်သောစစ်ဝတ်စုံရာထူးတံဆိပ်များကို မျှော်လင့်တောင့်တနေကြသည်။စစ်ဌာနချုပ်
ပျဉ်းမနား ဘီဒီအေတပ်ရင်းမှ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်ဗိုလ်တာရာသည်တပ်ရင်းမှုးဗိုလ်ဇေယျ၏တာဝန်ပေးချက်အရ လူသူလက်နက်စာရင်းများမှားယွင်းနေသည့် ကိစ္စနှင့်
ပတ်သက်ပြီးစစ်ဌာနချုပ်ရှိစစ်ရေးချုပ်၏ရုံးအုပ်နှင့်တွေ့ရန်အရာခံ ဗိုလ်ဗဟန်နှင့်အတူမြင်းကိုယ်စီစီးလျှက် စစ်ဌာနချုပ်သို့ေ၇ာက်ာကြသည်။သူတို့ရောက်ရှိလာသောအချိန်သည်
သောရုံးအုပ်မှာအပြင်ခဏထွက်သွားသဖြင့်ပြန်အလာကိုစောင့်ရင်းဗိုလ်ချုပ်ထိုင်ရာရုံးခန်းသို့လျှောက်ကြည့်ရာဗိုလ်ချုပ်ကိုမတွေ့သဖြင့်ရုံးဆင်းသွားပြီဟုထင်ကာ ဗိုလ်ချုပ်၏ရုံးခန်းနှင့်ကပ်လျှက်ရှိသော ကိုယ်ရံတော်ဗိုလ်ကြီး၏အခန်းထဲဝင်ပြီး ထိုင်စောင့်နေကြသည်။ရုံးဆင်းချိန်ကျမှပင်ပစ္စည်း (စစ်ဝတ်စုံ)သေတ္တာအပြည့်တင်ထားသောထရပ်
ဗိုလ်နှင့်ထိုက်သင့်သောစစ်ဝတ်စုံမဟုတ်ပေ။အစီမ်းရင့်ရောင် ရှပ်လက်တိုကိုဝတ်ဆင်ကာ မြင်းစီးဘောင်းဘီရှည်နှင့်စစ်ဖိနပ်တစ်ရံကိုစီးထားပြီးခါးတွင် ဂျပန်ခါးပတ်ပြားကြီးကို
ပတ်ထားသည်။စားပွဲထောင့်တစ်နေရာတွင်မြန်မာ့လွပ်လပ်ေ၇းတပ်မတော်ခေတ်တစ်လျှောက်လုံးဆောင်းလာသည့် ဂျပန်အရာရှိများဆောင်းလေ့ရှိသည့် စစ်ဦးထုပ်တစ်လုံးကို
တွေ့ရသည်။အခန်းထောင့်တွင် ဂျပန်ဓားရှည်တစ်လက်ကိုထောင်ထားသည်။ဗိုလ်ချုပ်၏ဆံပင်မှာ ဆီနှင့်ကင်းဝေးပြီးဖြီးလိမ်းခြင်းမပြုသဖြင့်ဖရိုဖရဲဖြစ်နေ၏ ။ ဗိုလ်ချုပ်၏စစ်ဝတ်စုံ
မှာလည်းရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့်အဖြူရောင်ရောနှောကာဟောင်းနွမ်းနေလေပြီ။ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ပါလက်ပါစာရေးနေသဖြင့် သူတို့နှစ်ဦးလည်း အနှောက်အယှက်မပေးလိုသဖြင့်ပြော
သို့တစေအပြင်တွင်ပစ္စည်းသေတ္တာများသယ်ချနေသောရုံးတာဝန်ခံ၊ပစ္စည်းထိန်းဌာနအရာရှိများ၊အကြပ်တပ်သားများသည် စည်းလွတ်ဝါးလွတ် ပြောချင်ရာစကားများကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပြောနေကြသည်။သူတို့လူစုသည်ဗိုလ်ချုပ်ရုံးပြန်တက်ပြီးသူ့အခန်းအတွင်း အလုပ်လုပ်နေသည်ကိုလုံးဝသိပုံမရပေ။သတိပြုမိပုံလဲမရပေ။
"ဒီလောက်ကြမ်းတမ်းတဲ့အ၀တ်တွေဝတ်ရတာ ကျောယားလိုက်ပါဘိကွာ။အိမ်မှာတုန်းကတစ်ခါမှတောင်စိတ်မကူးခဲ့တဲ့ ယူနီဖောင်းတွေလက်တောင်မသုတ်ခဲ့တဲ့ အ၀တ်ကြမ်းတွေကွာ" ရဲဘော်တစ်ယောက်က ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်နဲ့ ရယ်ကာမောကာပြောလိုက်သည်။ဗိုလ်ချုပ်သည်စားရေးနေရာမှ ရုတ်တရက်ရပ်လိုက်ပြီးမျက်တောင်
"ချီးမှပဲ တို့မျှော်လင့်ခဲ့သလို စမတ်ကျကျမဟုတ်ဘဲလူရယ်စရာ အ၀တ်ကြမ်း၊ဖျင်ကြမ်းကြီးတွေနဲ့လာတိုးနေပြီ။ကောင်းတယ်ကွာ၊သိပ်ကောင်း။ကူလီဝတ်တဲ့ အ၀တ်မျိုးတွေ
ကွ" တစ်ယောက်က ၀င်ပြီးပြောလိုက်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏မျက်နှာသည်ရုတ်တရက်တင်းမာခက်ထန်သွားလေသည်။မျက်လုံးနှစ်လုံးကလည်းအရောင်တွေ ၀င်းဝင်းတောက်လျှက်ဒေါသထွက်နေသည်။
"ဟေ့ကောင်တွေ ခုထုတ်ပေးတဲ့စစ်ဝတ်စုံဝတ်ပြီး မြို့ထဲသွားရင် ဂျပန်တပ်ကခိုင်းတဲ့ဟေးတိုးတပ်သားတွေထင်ပြီးဂျပန်တပ်ကတန်းခိုင်းမှာသေချာတယ်။မင်းတို့သာကြည့်ပြောပြပေတော့။ဘယ်လိုအ၀တ်အစားတွေမှန်းမသိပါဘူးကွာ"
တစ်ဖက်ခန်းမှအသံများကလဲ မလျှော့တမ်းဟာသစွက်ကာ ပြက်လုံးထုတ်လိုက်ပြန်သေးသည်။ဗိုလ်ချုပ်သည်တွေဝေပြီး မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာစဉ်းစားနေ၏ ။ ဒေါသဖြစ်နေ
ရာမှ ဗြုန်းခနဲ ဖောင်တိန်ကို စားပွဲပေါ်သို့ပစ်ချလိုက်သည်တစ်ချိန်လုံးသူတို့နှစ်ယောက် သူ၏အခန်းနှင့်ကပ်လျပ်ရှိနေသော အခန်းတွင်ရှိနေသည် မရှိနေသည်ကို လုံးဝအသိအမှတ်
မပြုသောဗိုလ်ချုပ်သည်ဗြုန်းခနဲ လှမ်းပြီး "ဟေ့တာရာ.....ဟိုဘက်ကစကားပြောနေတဲ့အကောင်တွေအားလုံးငါ့ဆီအမြန်ဆုံးခေါ်ခဲ့စမ်း၊သွားစမ်း။မြန်မြန်ကွ"အော်ငေါက်ကာ
တပ်သားအားလုံးကိုဗိုလ်ချုပ်၏အမိန့်အရ ဗိုလ်ချုပ်၏အခန်းထဲသို့တစ်စုတစ်ရုံးတည်းခေါ်ခဲ့ရသည်။ဗိုလ်တာရာလည်းစစ်ထုံးစံအတိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကိုအလေးပြုကာ "အမိန့်အတိုင်းခေါ်
"မင်းတို့ဘာကောင်တွေတုန်းကွ၊ဟင် ဟေ့ငါမေးနေတာမကြားဘူးလား" စူးစူးဝါးဝါးမေးမြန်းလိုက်သည်။ဗိုလ်ချုပ်၏အသံသည်စစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုလုံးလွှမ်းမိုးသွားသည်။
ထိုသူတို့သည် ကြောင်နေကြပြီး မှင်သက်မိသူများပမာ တစ်စုံတစ်ရာကိုမပြောဝံ့ကြပေ။သတိအနေဖြင့်ငြိမ်သက်စွာရပ်နေကြသည်။
"ပြောကြစမ်းမင်းတို့ဘာကောင်တွေတုန်း။ငါမေးနေတာမင်းတို့မကြားဘူးလား။ခုတင်ကမင်းတို့ရယ်လား မောလားနဲ့ပြောနေကြတာတွေလေ" ဗိုလ်ချုပ်သည်နောက်တစ်
"ကျွှန်တော်တို့စစ်ဝတ်စုံတွေညံ့တာနဲ့ဝေဖန်မိပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်" ဗိုလ်ချုပ်ကိုဗိုလ်အဆင့်ရှိသူတစ်ဦးက အရဲစွန့်ပြီးဖြေကြားလိုက်သည်။''ဘာကွ စစ်ဝတ်စုံတွေညံ့တယ် ကြမ်း
တယ်။လက်တောင်မသုတ်ချင်ဘူးဟုတ်လား ငါအကုန်ကြားတယ် မင်းတို့ဝေဖန်နေကြတာတွေ" ဗိုလ်ချုပ်သည်ကျယ်လောင်စွာပြောလိုက်ပြီး ကုလားထိုင်မှ ဗြုန်းခနဲထလိုက်ပြီး
တန်းစီထားသူများေ၇ှ့သို့ မတ်ကနဲ တက်လာရင်း......"မင်းတို့ငါအုပ်ချုပ်နေတဲ့ တပ်ထဲကအခုထွက်အလာကားကောင်တွေ မင်းတို့ကိုငါ နဲနဲမှအထင်မကြီးတော့ဘူး။နွားတွေ
တို့ရဲဘော်တွေယိုးဒယားကဒီအထိရန်သူတွေကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လာရတာမှတ်မှတ်ရရ ဘယ်စစ်ဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသလဲ ဟင်ပြောစမ်း" စိတ်ပါလက်ပါ လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးမေးလိုက်ပြန်သည်။"မင်းတို့က အခုမှယူနီဖောင်းလေးဘာလေး စစ်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်လို့ကွာ။ဟေ့တိုင်းပြည်နဲ့လူထုအတွက်ဆို
ရင် စစ်ဝတ်စုံမရှိလို့ ခါးတောင်းကြိုက်ပြီးတိုက်ရတော့ေ၇ာဘာဖြစ်သေးသလဲကွာ စစ်တိုက်နိုင်ဖို့သာအဓိကကွ ခုတော့မင်းတို့က ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စကားတွေပြောလို့"
ဗိုလ်ချုပ်သည် ခဏရပ်ပြီးဆက်ပြောပြန်သည်။"ခုတော့ တိုက်ပွဲမှာကျဆုံးခဲ့တဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်းတောင်မင်းတို့ပြောပုံသဘောထားတွေက သစ္စာဖောက်နေတဲ့
အကောင်တွေ၊မင်းတို့ကိုငါ့တပ်ထဲက ထုတ်ပစ်မယ်၊ထုတ်ရမယ်" ကြိမ်းဝါးလိုက်ပြန်သည်။ အကြိမ်းခံရသူဗိုလ်၊အကြပ်တပ်သားများမှာ မျက်ရည်ကျသူကျ၊ဒူးချင်းရိုက်ခတ်သူခတ်
အတော်စိတ်ထိခိုက်နေကြသည်။ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက်ရင်းတစ်ချက်တစ်ချက် ပါးစပ်သရမ်းသူတွေ့ကိုခေါင်းငဲ့ကာစိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနှင့်ကြည့်လိုက်လုပ်နေတာ ဗိုလ်ချုပ်သည်-"ဘာလဲကွ မင်းတို့က ဂျပန်တွေကားစီးပြီးအ၀တ်ကောင်းတွေဝတ်တာကိုအားကျလို့လား။အေးမင်းတို့မှတ်ထား။ငါတို့တပ်မတော်ဟာပြည်သူလူထုရဲ့သားသမီးတွေ
ဆိုတာကြည့်လိုက်စမ်း။တို့ပြည်သူလူထုတွေဟာစစ်ဘေးဒဏ်သင့်ပြီး တစ်ဖက်က ငပုတွေကတွေ့ကရာဆွဲယူအနိုင်ကျင့်ချင်တိုင်းအကျင့်ခံနေရတဲ့ဘ၀မှာမင်းတို့လိုအကောင်တွေက
ဇိမ်ခံချင်ကြတယ်။ကားသစ်ကြီးတွေစီးချင်ကြတယ်။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပြည်သူလူထုထက်အခွင့်အရေးပိုယူချင်ကြတယ်။လူထုက ၀တ်စရာ အကျီင်္ပုဆိုးမ၇ှိတဲ့ဘ၀မှာ မင်းတို့လို
အလိုက်ကန်းဆိုးမသိတဲ့အကောင်မိုက်တွေက စစ်ဝတ်စုံအကောင်းတွေဝတ်ချင်ကြတယ် မှတ်ထားအခုလို စိတ်မျိုးအမြင်မျိုးတွေရှိနေသမျှငါမျှော်မှန်းထားတဲ့ ပြည်သူ့တပ်မတော်
နဲ့တော့ ဝေးပါသေးတယ်ကွာ။ရှက်စရာသိပ်ကောင်းတယ်။မင်းတို့ပြည်သူလူထုအတွက်စစ်တိုက်နေတယ်ဆိုတာ အလကားပဲ လုံးဝအဓိပါယ်မရှိတော့ဘူး"
ပြောလိုက်ဟောက်လိုက် ကြိမ်းလိုက်ပြန်သည်။ မင်းတို့နားလည်လား။စဉ်းစားမိလား မင်းတို့ဖာသာ ဗိုလ်တွေ စစ်သားတွေ ရဲဘော်တွေဆိုပြီးတစ်ကယ်စစ်တိုက်ရတဲ့အခါမှာ
စစ်ပညာကောင်းကောင်းတက်နေပြီလား။ဘာတစ်ခုမှမတတ်သေးဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကို အတင်ကြီးပြီးဘ၀င်မြင့်နေတဲ့ကောင်စားတွေ။မင်းတို့ဒီလိုပြည်သူလူထုနဲ့ ကြပ်ကြပ်သွေးခွဲ
စိတ်တွေထားကြ။ငပုတွေက မင်းတို့ကိုဆော်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာမင်းတို့မြင်ရဲ့လား။ခွေးကောင်တွေဘာမှမသုံးမကျတဲ့ မင်းတို့ကိုငါ့တပ်ထဲကထုတ်ရမယ်"ဆက်လက်ပြီးဒေါ
နှင့်မောနှင့်ကြိမ်းဝါးလိုက်ပြန်သည်"မှားပါပြီဗိုလ်ချုပ်၊နောင်တရပါပြီ ဗိုလ်ချုပ်" အရာရှိနှစ်ဦးက ကတုန်ကယင်ဖြစ်ကာငိုယိုသံများဖြင့်တောင်းပန်တိုးလျှိုလိုက်ကြသည်။
ငါဘယ်လိုဝတ်ထားလဲ။ကြည့်ကြစမ်း။မင်းတို့နဲ့ဘာခြားလို့လဲ။မင်းတို့က ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်လို့ကွာ" ဗိုလ်ချုပ်သည်သူ၏ဟောင်းနွမ်းနေသောဝတ်စုံကို လက်ဖြင့်ပုတ်ပြီးပြလိုက်
သည် "ကျွှန်တော်တို့မှားပါပြီ ဗိုလ်ချုပ်။တောင်းပန်ပါတယ်။ကျွှန်တော်တို့အမှားကိုဝတ်ချတောင်းပန်ပါရစေ" မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျလျှက် တောင်းပန်ကာအသနားခံလိုက်ကြပြန်သည်
ဗိုလ်ချုပ်သည်သိမ်းကြုံးပြီး ဒေါသထွက်နေသောမျက်လုံးအစုံဖြင့်တောင်းပန်နေသူများကိုဝင့်ကြည့်လိုက်ပြီး "မှတ်ထားငါ့တပ်ထဲမှာ အခွင့်အရေးယူချင်တဲ့အကောင်တစ်ကောင်မှ
မရှိရဘူး။မပါစေရဘူး။လူထုငတ်ရင် အားလုံးငတ်ရမယ်။လူထုဆင်းရဲရင် တို့ရဲဘော်အားလုံးဆင်းရဲရမယ်။ငါလည်းဆင်းရဲရမယ်။ငါတို့တစ်တွေတည်ဆောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကြီးဟာ
သူ့ရှေ့တွင်ရပ်နေကြသူများမှာသူပြုသမျှ သူပေးသမျှအပြစ်ဒဏ်ကို ခံယူကြမည့် ရဲဘော်များဖြစ်နေကြည်သည်။အခိုက်အတန့်အတွင်း အပြောမှား၊အဆိုမှားခဲ့ရာ ယခုအခါ
ဗိုလ်ချုပ်၏သြ၀ါဒဆုံးမချက်များကြောင့်အမြင်မှန်ရခဲ့ကြသည်။ "သွားကြစမ်း၊မြန်မြန်ထွက်သွား၊အကောင်ရှုပ်တွေ ကြာကြာနေရင် မင်းတို့ကို ငါဆော်ထည့်မိလိမ့်မယ်"
ဗိုလ်ချုပ်က ကြိမ်းဝါးကာ အခန်းအတွင်းမှ နှင်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ပါးစပ်သရမ်းမိသူများလည်း အရေးတကြီးဗိုလ်ချုပ်ကိုအလေးပြုကာသုတ်သီးသုတ်ပြာနှင့်ကြောက်ကြောက်
ရွံ့ရွံ့ မျက်နှာငယ်လေးများဖြင့်ထွက်ခွာသွားကြသည်၊၊ ......................။